Tag: rgb | Martech Zone
Okike eji eme ihe: Akara ókwú, faịlụ, Acronyms na nkọwapụta nkọwapụta
Okwu eji eme ihe nke ndi mmebe ihe osise na ntinye aka nke web na mbiputa.
Sunday, November 10, 2013 Monday, November 11, 2013 Douglas Karr
Ọ bụrụ n ’ị bụ ụdị marketer nwere ike ikwu okwu jargon na atụmatụ, ikekwe ị na-arụ nnukwu ọrụ n’oge ugbu a. Anyị na-agwa ndị folti IT, ndị mmepe na ndị nrụpụta… ma anyị na-atụgharịrị asụsụ n'etiti ha niile! Emere bụ ụlọ ọrụ dijitalụ na-emeri emeri nke mepụtara ọmarịcha ihe ọmụma a iji nyere ndị mmadụ aka ịghọta ụdị agba na ụdị faịlụ. Na oge a na ngwaọrụ na-enwe otutu image densities na faịlụ na mkpakọ na-enye guzozie ọsọ na